Izindaba - Ibhodlela elisha elingenamoya lokufika okusha- Kungani ungahambi nomoya ngokupakisha kwakho kwezimonyo?
Ibhodlela elisha lokufika elingenamoya – Kungani ungahambi umoya ekupakisheni kwakho kwezimonyo?
Amabhodlela amaphampu angenawo umoya avikela imikhiqizo ebucayi njengokhilimu bokunakekelwa kwesikhumba bemvelo, ama-serum, izisekelo, nezinye izithambiso zokwenziwa kwamafomula ezingenakuvikela ngokuzivikela ekuvezeni umoya ngokweqile, ngaleyo ndlela kwandise impilo yeshalofu lomkhiqizo kuze kufike ku-15% ngaphezulu. Lokhu kwenza ubuchwepheshe obungenamoya bube ikusasa elisha lobuhle, ukupakisha nezimonyo.
Ibhodlela elingenamoya alinayo i-dip tube, kepha kunesifo esivuleka ukwaba umkhiqizo. Lapho umsebenzisi ecindezela ipompo, kudala umphumela we-vacuum, udonsela umkhiqizo phezulu. Abathengi bangasebenzisa cishe wonke umkhiqizo ngaphandle kokulahlwa kwemfucuza futhi ngeke bakhathazeke ngempikiswano evame ukuza nepompo ejwayelekile kanye nokupakisha kwezimonyo.
Ngaphezu kokuvikela ifomula yakho nokwandisa impilo yayo eshalofini, amabhodlela angenamoya nawo anikela ngenzuzo yokubeka uphawu. Yisixazululo sokupakisha esiphakeme esiza nemiklamo ehlukahlukene ukuhlangabezana nokuma kwakho kobuhle.
Ukupakisha kuyinto esemqoka embonini yezimonyo namakha. Ukupakisha kulezi zimboni akuhlobene nje kuphela nokuphepha nokuvikelwa, kepha futhi kuhlobene nokuqinisekisa ukuthi imikhiqizo ihlala isesimweni sayo esihle ngesikhathi sokuhamba nokugcinwa. Ukubaluleka okwandayo kokuzilungisa komuntu siqu, kuhambisana nezidingo ezikhulayo zeminyaka eyizinkulungwane, kuphoqe izinkampani eziningi zamakha ukunethezeka ukuba zibhekane nezidingo zemakethe yendawo. Isibonelo, i-All Good Scents, inkampani yamakha okunethezeka ezinze e-Ahmedabad, yasungulwa ngonyaka we-2014. Le nkampani yethule izimpahla zayo zokunethezeka emakethe yasendaweni futhi yaqopha ukwanda kokuthengisa okulinganiselwa ku-40% ngo-2016.
E-United States, ukuthandwa okwandayo kobuchwepheshe obuphambili bezimonyo zokupakisha kanye nomkhuba wokukhula kwemikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba ngezinye zezinto ezibangela ukukhula kwezimakethe. Ukunakekelwa kwezipikili nemikhiqizo yamakha kubonakala kungukukhathazeka okukhulu kwabathengi nabathengisi ezweni. Ngenxa yesidingo esikhulayo sezimonyo, abahlinzeki abaningi bezimonyo nabo bamukela futhi basungula izixazululo zokupakisha ingilazi ezihlakaniphile ukwenza ngcono izinzuzo zamakhasimende nokwenza ngcono ukuphepha komkhiqizo.
Imbiza ye-Eye Cream, Isitsha Sokugeza Powder Ngesefa, Iziqukathi Zokhilimu Bezimonyo, I-cosmetic Cream Jar, Ukupakisha kweCream Jars cosmetic, I-Black Bottle Gel Polish,